I-Norway yi-fjord. Inqabileyo, ishushu esibandayo ebandayo ebomini. Ukuma kwinqanaba elincinci - umda we-fjord kunoma iyiphi ikhonkco lelizwe elinotyebi-kwi dolophu yase-Stolvere, kwinqununu yeoli ye-Stavanger okanye phakathi kwe-Oslo - uyaqonda ukuba akukho ntlanzi engcono kunezo ndawo! Inyaniso kukuba kwi-deep crystal ye-fjords, apho kukho umxube wamanzi olwandle kunye ne-glacial fresh, uhlobo luye lwadala indawo ekhethekileyo yendalo yamanzi. Kwaye nabemi beziqithi kunye neendawo eziselunxwemeni (kunye nanjalo eNorway bonke!), Kwakhona, balethe ubugcisa bokuloba kunye nokusetyenziswa kwezilwanyana zasemanzini kuze kube lula!
Sithetha eNorway , sithetha - intlanzi! Ngokuqinisekileyo, ukutya okuseNorway akukhawulelwanga kwimveliso yentlanzi kuphela. Iindlalifa zeVikings ziyakuthanda amazambane, ungayeki inyama uze udibanise isonka! Ngaphezu koko, i-feminisation yomhlaba wonke eyadlulayo kwiminyaka engama-40 eyadlulayo ilizwe eliye lahlala lilungelelaniso le-domostroyevskuyu, lakhokelela ekubeni abantu baseNorway ba kholelwa ukuba isinkwa sisiseko sesondlo sosuku.
Iimpawu eziqingqiweyo ezivela kwisonka kunye nemveliso eyahlukeneyo - ushizi, inkukhu, intlanzi, imifuno - eyona nto yokutya! Kwaye isonka kwivenkile, ngaphezu kokugqityiweyo, sithengiswa ngemveliso egqityiweyo, ukuze bakwazi ukuyibeka ehovini imizuzu embalwa ekhaya kwaye bakhonze etafileni ngobushushu nokushisa. Kwaye akukho mfazwe e-sandwich! AmaNorwegi anzima ukubiza isizwe esihambelanayo, kodwa oku akukuchaphazeli ukuvuya kwabo kwenene kunye nesondlo. Kwaye akuyi kudala iingxaki kubafazi baseNorway xa bekhetha i-wardrobe. Izitolo zokugqoka ziyamangaliswa ngobuninzi bezinto ezihambayo zobukhulu bonke, kwaye kungekhona nje nge-eskami eyaziwayo kunye ne-emki, ethandekayo ngababoneleli bekhaya. Ngaphezu koko, abantwana abaseNorway basebenze ixesha elide ngenxa yokungaqhelekanga - iingubo, iingubo eziphosakeleyo kunye neengubo eziqhekezayo, ngokubona kwabo, zifanele zonke iimeko zokuphila. Nangona kunjalo, kunye okanye ngaphandle kwesonka, malunga neekhilomitha ezingama-60 zeentlanzi ngonyaka zithengiswa ngokuqhelekileyo ngabo bonke abemi beli lizwe elihle elisenyakatho. Izintandokazi iintlobo - i-cod, i-salmon, i-saithe, i-mackerel kunye ... i-herring yethu endala!
Ukukhwela kwi-herring. Kwakungabarhwebi baseNorway abathi, nge-11 leminyaka, bazisa iYurophu ukuba batyule kunye nokutshiza i-herring, eyayiyinto enye yezinto zokutya eziphambili kubo. Yaye, ngokubizwa ngothando ngokuthi "i-Herring" yaseSlav, yawela enkundleni kangangokuthi asikwazi ukucinga ngomthendeleko wendabuko ngaphandle kwakhe! Okunandisayo, okunomsoco, okulungele ukugcinwa, kubuye kuncedo kakhulu. Ngendlela, ngenxa yokubambisa abadobi baseNorway, i-herring kwingingqi yethu ifumene isimo somkhiqizo wesizwe. Ngoku kunzima ukukholelwa, kodwa kude kube ngephakathi kweXIXX yexestile, i-herring ye-salted yayithathwa njengento ecocekileyo kwaye yayingenakufikeleleka kumgcini-mhlaba! Emva koko, abaphathi babatshela abapheki babo ukuba bakhonze i-herring kwiintlobo ezahlukeneyo zokuxuba - kunye no-anyanisi, amazambane kunye ne-beet cubes, phantsi kweqanda leqanda, kunye nekhukhamba enetyuwa ... Ngoko ukutya okuninzi ngentando yesininzi kunye nentandokazi esinayo "inqanawa phantsi kweengubo zoboya" ezivela kuyo!
I-Herring iyimithombo enamandla yamaprotheni , iiVithamini A, D, B12 kwaye kuyimfuneko kuthi kuthi i-vitamin E, ebizwa ngokuba yi-cosmetic beauty carrier! Kwiminyaka yakutshanje, oogqirha behlabathi lonke bathetha ngokunyanisekileyo ngempembelelo emangalisayo kumzimba we-polyunsaturated fatty acids i-Omega-3, efumaneka kwizinto ezininzi kwiintlanzi ezinamanqatha. Umzimba womntu awunako ukulungelelanisa oku kuncedo, kodwa kuyadingeka ngokukhawuleza ukugcina impilo yomzimba kunye nengqondo. I-Eloquent yinto yokuba kumazwe apho abantu basebenzisa inani elaneleyo lokutya kwezilwanyana zaselwandle, ipesenteji yezifo ezinzulu njenge-osteoporosis kunye nokudandatheka kukuncinci. Kwaye ukubuyiswa kwezigulane emva kwe-infyoction ye-myocardial, ukuxhatshazwa kweengxaki zeentlungu kunye nokuba kubanda kakhulu kubanda kubonakala ngokukhawuleza!
Ukukhawuleza = umgangatho! Ukutya i-hering yaseNorway (ebizwa ngokuba yi-Atlanto-Scandinavian herring) ayikho ekude eNorway. Ngaphezu koko, ngokuqinisekileyo iimpawu ezilungileyo zeentlanzi, ezikhethwe ngawe kwivenkile zethu nakwiimarike, zakhawuleza amanzi ase-fjords! Ngenxa yokuba iNorway ngumthengisi omdala kunye nomdabu wezilwanyana zasemanzini.
Izixhobo zokupheka zesizwe . Intlanzi eNorway idliwa ngabantu bonke. Ukuba akusiyo yonke imihla, yonke imihla. Ngenxa yoko ulwahlulo lwezixhobo zokutya, zokupheka ezikhethekileyo, iisusi ezingaqhelekanga kunye nokuhlanganiswa kokuqala kwemveliso. Kwivenkile yokudlela, umzekelo, njengesibonakaliso kwiintlobo ezahlukeneyo ze-aquavit (i-potato vodka yendabuko) ungakhonza into efanayo, kodwa ngaphantsi kwamasiksi ahlukeneyo-kwaye ukunambitha, ngokufanelekileyo, kuyahluka! Kodwa kusekho - kakhulu. Kwaye kunye neendawo ezinobisi kunye nabokutshaya zihlonishwa kakhulu ... i-herring fresh. Ngokungafani nathi, ikulungele ukupheka (amaninzi ngokukhawuleza nje) kunye nokutya ngokutya. Kwaye, ngokubanzi, imfihlelo eyintloko yokupheka isitya se-fishfish, ngokubona kwabo, KUNYE!
Indlela yokunqoba uxinzelelo xa uhamba ngendiza
Phumla ebusika nomntwana omncinci
Indlela yokulungiselela i-barbecue evulekile
Ukuzonwabisa kwe-TOP-5 eCrimea kubantwana
Iikhenkco zeentliziyo zentliziyo
I-Corset - into ebaluleke kakhulu ye-wardrobe ngo-2014
I-Horoscope ngoDisemba 2017 - I-Cancer Cancer - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Ukulungiswa kwimilo yomlomo kunye nokwenza
Iiresi zokutya zokulwa ne-cellulite
Indlela yokuhlobisa indlu ngomnyaka weNjuni Ephuzi: 20 yeengcamango ezintle kakhulu!
Izipho ezivela kwi-chocolates ngezandla zakho: iingcamango ezingcono kunye nesithombe
Ikhalenda yeLunar yefama yeloli ngoFebruwari 2016
Imiboniso yefestile kwi-London Underground
Ukubhiyozela umtshato wegolide
Isaladi kunye nenkukhu, ipepper kunye neerothi
Umntwana kwiinyanga ezili-10: ukutya, kufuneka akwenze ntoni?
Hlaziya kwakhona iinjongo